Venerable Kusalasami: January 2015
စကန်ဒီနေဗီးယားတိုင်းပြည်များသို့ ခရီး (အပိုင်း ၁၁)
ကိုဘလိုင်တို့ မိသားစုနှင့်အခြားမိသားစုဝင်များကို နှုတ်ဆက်ကြသည်။ ကပ္ပိယကြီးကားနှင့်ကိုစိုးစိုးမောင်တို့ကားဖြင့် သင်္ဘောဆိပ်ဆီ ထွက်ခွါခဲ့ကြသည်။
သင်္ဘောဆိပ်ရောက်သည်နှင့် ထီးထီးမားမားကြီး ကျောက်ချရပ်နေသော သင်္ဘောကြီးကို မြင်ရသည်။ စိတ်ထဲမှာ အတော်လေး မင်သက်မိသွားသည်။
ဒီသင်္ဘောကြီးနှင့် သွားရတော့မည်ဆိုသောအတွေးဖြင့် စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။ သင်္ဘောပေါ်ရောက်ဖို့အတွက် လေဆိပ်တွေမှာလို Check in တွေ၊ Terminal တွေနှင့် ဖြစ်သည်။ ကပ္ပိယကြီးကတော့ လူရော၊ ကားရော သင်္ဘောပေါ် တက်ရမည်ဖြစ်သဖြင့် သီးသန့်နေခဲ့သည်။ ပြီးမှ ကားနှင့်အတူ သင်္ဘောပေါ် တက်မည်။
ရွှေညဝါဆရာတော်နှင့် ကျန်အားလုံးကတော့ Check in နေရာရောက်ဖို့အတွက် ဥမင်က အရှည်ကြီးကို ဖြတ်ကာ သွားကြသည်။ Check in နေရာလည်း ရောက်ရော အားလုံး ကားနှင့်သာ တက်ရမည်ဟု ဆိုသဖြင့် ပြန်ဆင်းလာကြရသည်။ သင်္ဘောပေါ်တက်မည့်ကားများက နည်းနည်းနောနော မဟုတ်။ အကြာကြီး တန်းစီကြရသည်။ သင်္ဘောပေါ်ရောက်တော့ ကားတွေအများကြီး အထပ်အထပ် ပါ့ကင်းများတွင် တန်းစီရပ်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
သင်္ဘောပေါ်တွင် အခန်းပေါင်းများစွာ ပါဝင်သည်။ စာရေးသူတို့အခန်းကို မနည်းလိုက်ရှာကြရသည်။ အခန်းများက အလွန်သန့်ရှင်းသည်။ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာ တွဲလျက်ပါသည်။ ပစ္စည်းများကို ချပြီး စကားစမြည် ပြောကြသည်။ စိတ်ကတော့ သင်္ဘောအပေါ်ဆုံးထပ်သို့ သွားကြည့်ချင်နေပြီ။ “ဆရာတော် သင်္ဘောကြီးက ကောင်းလိုက်တာ၊ အထပ်တွေလည်း အများကြီးပဲ”ဟု စာရေးသူက ပြောသောအခါ ဘေးနားတွင်ရှိနေသော ကိုလှမင်း(နော်ဝေ)က “အရှင်ဘုရား … ဒီသင်္ဘောက အဟောင်းကြီး ရှိသေးတယ်၊ ဒိထက်ကောင်းတဲ့သင်္ဘောတွေ အများကြီးဘုရား”ဟု ဆိုသည်။ ထိုအခါ အနီးတွင်ရှိသော ရွှေညဝါဆရာတော်က “ဟေ … ငါတို့က ငါတို့ကိုယ်ငါတို့ လကမ္ဘာပေါ် ရောက်နေပြီလို့ ထင်နေကြတာ၊ မင်းက အဟောင်းကြီးပဲ ရှိသေးတယ်တဲ့ကွာ”ဟု ဆိုလိုက်သဖြင့် အားလုံး ပွဲကျသွားခဲ့သည်။
ပစ္စည်းများ နေရာတကျ ချပြီးသောအခါ ဦးသူရိယနှင့်အတူ သင်္ဘောအပေါ်ဆုံးထပ်သို့ တက်သည်။ ဆရာတော်နှင့်ကပ္ပိယတို့က နောက်မှ လိုက်လာမည်ဟု ဆိုသည်။ အပေါ်သို့ တက်ရာတွင် ကြီးမားသန့်ပြန့်သော ဓာတ်လှေကားရော၊ ရိုးရိုးလှေကားရော ရှိသည်။ စူပါမားကတ်ကြီးတစ်ခုကိုလည်း တွေ့ရသည်။ မြေပြင်ပေါ်ရှိဆိုင်များကဲ့သို့ ပစ္စည်းမျိုးစုံရှိသည်။ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ယမကာဆိုင်များ၊ ကော်ဖီဆိုင်များ၊ ဒစ္စကိုခန်းမများ၊ လောင်းကစားဝိုင်းများ၊ အပျော်ကစားစရာ ဂိမ်းများ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ စက်ဘီး၊ သေနတ်ပစ် … မျိုးစုံပြုလုပ်နိုင်သည့် ခန်းမကြီး။ ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း သင်္ဘောပေါ် ရောက်နေသည်ဟု မထင်၊ မြေပြင်ပေါ်က အဆောက်အအုံကြီးတစ်ခုထဲသို့ ရောက်နေသလား ထင်မှတ်ရသည်။
အပေါ်ဆုံးထပ်ရောက်သည့်အခါ ရှုခင်းများကို အားပါးတရ ကြည့်မိသည်။ ခဏကြာသောအခါ ရွှေညဝါဆရာတော်နှင့်ကပ္ပိယတို့ ရောက်လာကြသည်။ ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ကြသည်။ ပျော်ရွှင်စွာဖြင့် စကားတွေ ပြောကြသည်။
စာရေးသူက ကိုကိုးကျွန်းသွားစဉ် သင်္ဘောကြီးပေါ်တွင် “ရွှေပင်လယ်ကြီး …. ကာဆီးထားလို့ …”သီချင်းကို ဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့ သီဆိုနေကြသော လူငယ်များ၏အသံကို နားထဲမှာ ကြားယောင်သည်။ သူတို့နှင့်အတူ လွမ်းသလို နွေးသလိုလို တစ်မျိုးလေးဖြစ်သည်။
သီချင်း၏ မူလအဓိပ္ပာယ်ကတော့ အချစ်သီချင်း ဖြစ်မည်။ ပင်လယ်ကြီးခြားနေသော ချစ်သူကို မျှော်လင့်တမ်းတသည့် အလွမ်းသီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်မည်။ ပင်လယ်ကြီး ဘယ်လိုပင် ကာဆီးထား၊ ကာဆီးထား လွမ်းနေရတယ်၊ ဆွေးနေရတယ်၊ မျှော်နေရတယ်ဆိုသောအခြေအနေကို အနုပညာမြောက်ဖန်တီးထားတာ ဖြစ်မည်။
စာရေးသူကတော့ တစ်မျိုးတစ်ဖုံ တွေးသည်။ ရွှေပင်လယ်ကြီး၏အဆုံးမှာ အမိမြေ၊ မွေးရပ်မြေ၊ သားချင်းတို့မြေ ရှိသည်။ ချစ်ရခင်ရသော ဆွေမျိုးများ၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများ … ရှိသည်။
စပယ်တွေ၊ သဇင်တွေ၊ ပိတောက်ပန်းများ၏ ရနံ့များ ကြိုင်လှိုင်နေသည်။ ချယ်ရီတွေ ဘယ်လောက်လှအောင် ပွင့်ပွင့် ရင်ထဲမှာ အမြစ်တွယ်နေသော စံပယ်တွေ၊ သဇင်တွေ၊ ပိတောက်ပန်းများနှင့်တော့ အစားထိုးမရနိုင်ပါ။
ပင်လယ်ကြီး၏ ဟိုမှာဘက်ကမ်းတွင်ရှိသော အမိမြေကို ဒီမှာဘက်ကမ်းတွင်ရှိသော ကြွယ်ဝမှုများ၊ ကိုယ်ကျန်းမာ,စိတ်ချမ်းသာခြင်းများ ရှိစေချင်သည်။ “…. ဘယ်လောက်ထိ စောင့်ရမယ် မသိဘူး”စာသားလေး အတွေးထဲရောက်လာတော့ မောသွားသည်။ တော်ရာမှာနေ နွေမိုးဆောင်းတို့ ကုန်ဆုံးကူးပြောင်းချိန် မလွမ်းဘဲ မည်သူမျှ မနေနိုင်ကြပါ။ အပေါ်ဆုံးထပ်တွင် အတန်ကြာနေပြီးသောအခါ အခန်းသို့ပြန်ပြီး ရေမိုးချိုးသည်။
သင်္ဘောအခန်းတွင်း၌ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သော ရေချိုးခန်းအိမ်သာပါ တွဲလျက်ပါသဖြင့် အဆင်ပြေလှသည်။ ခဏနားသည်။ ပြီးလျှင် ဦးသူရိယနှင့်အတူ သင်္ဘောပေါ် နောက်တစ်ကြိမ် လျှောက်လည်ကြသည်။
နောက်တစ်ကြိမ် သင်္ဘောအပေါ်ဆုံးထပ်တွင် အတော်လေး အေးနေပြီ။ ဂျာမနီထက် အအေးဓာတ်ပိုသည်ကို သတိမထားမိခဲ့။ သို့ရာတွင် သင်္ဘောအပေါ်ဆုံးထပ်တွင် နေရတာ အလွန်သဘောကျသည်။ ည ၁ဝ နာရီခန့်အထိ စကားပြောဖြစ်ကြသည်။ အလွန်အေးပြီး မခံနိုင်တော့သည့်အခါမှ အောက်ထပ်သို့ ဆင်းခဲ့ကြသည်။ အောက်ထပ်သို့အဆင်း အပျော်စီး ဆိုင်ကယ်၊ ကား စတာတွေ ရှိသည့်ခန်းမတွင် ကပ္ပိယကိုပြောင်ကြီးနှင့်ကိုလှမင်းတို့ ရောက်နေကြသည်။ သူတို့နှင့်အတူ နာရီဝက်ခန့် နေပြီး အခန်းသို့ ပြန်လာခဲ့ကြသည်။
မနက်ကျတော့ အစောကြီး နိုးနေပြန်သည်။ သင်္ဘောအပေါ်ဆုံးထပ်သို့ တစ်ပါးတည်း ပြန်တက်လာခဲ့သည်။ နော်ဝေကမ်းခြေများကို လှမ်းမြင်နေရပြီ။ အအေးဓာတ်က နားရွက်များပင် ကျင်လာသည်။ နှုတ်ခမ်းများ ခြောက်ကပ်လာသည်။
နော်ဝေကမ်းခြေများကို ကြည့်ရင်း ဒိန်းမတ်နှင့်ပတ်သက်သည့် ရင်ထဲမှာ ကိန်းနေသော အတွေးအမြုတေများနေရာတွင် နော်ဝေနှင့်ပတ်သက်သည့်အတွေးများ ဝင်ရောက်နေရာယူနေပြီဆိုတာ သိလိုက်ရသည်။ “နော်ဝေ … မင်းမြေပေါ် မကြာခင် နင်းတော့မယ်” တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်သည်။ နော်ဝေက ငြိမ်းချမ်းရေးရနံ့များဖြင့် ခွန်းတုန့်ဆိုသည်။
မနက် ၇ နာရီ ၁၅ လောက်မှာ သင်္ဘောကြီးက နော်ဝေနိုင်ငံ၊ အော်စလိုမြို့ကမ်းမှာ ကပ်သည်။ အထပ်များစွာပါပြီး ထုထည်ကြီးမားလှသော သင်္ဘောကြီးပင်ဖြစ်သော်လည်း ကမ်းကပ်ပုံမှာ ညင်သာလှသည်။
သင်္ဘောကုန်းပတ်ပေါ်မှ အောက်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်သောအခါ လက်ပြနေသူတစ်ဦးကို တွေ့လိုက်ရသည်။ လာကြိုနေသော ကိုမိုးမောင်မောင်ပင် ဖြစ်ပါ၏။ လေယာဉ်ဆိုက်ပြီး လေဆိပ်အတွင်း သွားရသလိုမျိုး ခရီးသည်များ အစီအရီ ဆင်းကြသည်။ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်ကြသည်။ သင်္ဘောပေါ်တွင် ကားယူရန် စောင့်နေသော ကပ္ပိယကြီးကို စောင့်ကြသည်။
ကားက တော်တော်နှင့် ရောက်မလာသဖြင့် ကိုမိုးမောင်မောင်က တက္ကစီငှါးပြီး သူ့နေအိမ်သို့ ရွှေညဝါဆရာတော်နှင့်စာရေးသူတို့ကို ပင့်သည်။ မကြာခင်မှာပဲ ကိုမိုးမောင်မောင်အိမ်သို့ ရောက်သည်။ ကပ္ပိယကြီးတို့ကား အတော်ကြာမှ ရောက်လာကြသည်။ ကိုမိုးမောင်မောင်နှင့်မပူစူးတို့က အရုဏ်ဆွမ်းကပ်သည်။ ရွှေညဝါဆရာတော်၊ ကိုမိုးမောင်မောင်မိသားစု၊ သူ၏သူငယ်ချင်းများ ပျော်ပျော်ပါးပါး စကားပြောကြသည်။အက်ကြောင်းထပ်နေသောနိုင်ငံရေးကိစ္စများသာ များပါသည်။
စာရေးသူကတော့ ဘာသာရေးနွှယ်သောအကြောင်းအရာများကို ကိုမိုးမောင်မောင်ထံမှ နားထောင်သည်။ နော်ဝေနိုင်ငံတွင်လည်း ဘာသာမဲ့များ တိုးပွားလာခြင်းနှင့် အစ္စလာမစ်ပြဿနာက ရှိနေသည်။ အများအားဖြင့် ဒိန်းမတ်စသော ဥရောပနိုင်ငံများလို ဒုက္ခသည်များအဖြစ် ခေါ်သွင်းပြီး ပညာသင်ပေး၊ နေစရာစားစရာပေး၊ ပြီးမှ အိမ်ရှင်ကို အားမနာဘဲ အစ္စလမ္မိုက်ဇေးရှင်း ပြုလုပ်ချင်ကြသည့်ကိစ္စများကို သိရသည်။
ဥရောပအစိုးရများက သူတို့တွေ သနားလို့ခေါ်လာသောသူများသည် ဖြူဖြူမည်းမည်း သူတို့စနစ်ထဲဝင်အောင် သွင်းနိုင်လိမ့်မည်ဟု ကနဦးက ယူဆထားကြသည်။ သို့ရာတွင် မွတ်စလင်ကို သူတို့စနစ်ပုံစံထဲ သွင်းမရကြောင်းကို သိလာရချိန်မှာတော့ အချိန်က အတော်လေး နှောင်းနေပုံရသည်။
Anders Behring Breivik ဆိုလျှင် လူအတော်များများ သိကြလိမ့်မည်။ သွေးပျက်ဖွယ်၊ ကြောက်မတ်ဖွယ် လူသတ်မှုကြီးကို ကျူးလွန်ခဲ့သည့်သူဖြစ်သည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းတွင် အကြီးမားဆုံး ရာဇဝတ်မှုကြီးတစ်ခုကို ကျူးလွန်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ လူပေါင်း ၆၉ ယောက်ကို အူတိုယ (Utoya)ကျွန်းတွင် သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်ခဲ့သည်။ အော်စလိုမြို့၊ အစိုးရဌာနတစ်ခုကိုလည်း ဗုံးခွဲသည်။ လူ ၈ ယောက်သေသည်။ သူက စိတ်မနှံ့လို့လည်း မဟုတ်ပါ။ သူ ခိုင်ခိုင်မာမာ စွဲကိုင်ထားသော အယူအဆကြောင့်သာ ဤကဲ့သို့ သတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နော်ဝေနိုင်ငံသားများသည် အကြမ်းဖက်ခြင်း၊ လူသတ်ခြင်းကို မနှစ်မြို့ကြပါ။ သို့ရာတွင် သူ့ယုံကြည်ချက်နှင့်သူ့အမျိုးသားရေးအမြင်ကိုတော့ သဘောကျသွားခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုသည်။
နော်ဝေနိုင်ငံစသည့် အနောက်ဥရောပအစိုးရများသည် Multicurturalism ခေါ် ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံဝါဒကို လက်ခံကျင့်သုံးသည်။ သူက ထိုဝါဒကို ဆန့်ကျင်သည်။ အထူးသဖြင့် ဥရောပတွင် မွတ်စလင်များ လာရောက်အခြေချနေခြင်းကို လက်မခံနိုင်။ မွတ်စလင်တို့၏အန္တရာယ်ကို သတိထားဖို့ ဟောပြောသည်။
သို့သော် အစိုးရက မွတ်စလင်များကို ထောက်ပံ့သည်။ ကူညီသည်။ တစ်နေ့တစ်ခြား မွတ်စလင်များ တိုးပွားလာသည်။ ဒါကို သူက ဆန့်ကျင်သည်။ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓာတ်ကို အခြေခံပြီး မွတ်စလင်များကို ထောက်ပံ့သောအစိုးရကိုပါ ဆန့်ကျင်သူဖြစ်လာသည်။ သို့အတွက်ကြောင့် ကြောက်မတ်ဖွယ် လူသတ်မှုကြီးကို ကျူးလွန်မိခြင်း ဖြစ်သည်။
သူက လက်ရှိအာဏာရပါတီ၏ မျိုးဆက်ကို ဖြုတ်လိုက်လျှင် မွတ်စလင်ကို ထောက်ပံ့နေသောအစိုးရ ကျဆုံးသွားလိမ့်မည်ဟု ယူဆသည်။ တရားရုံးတွင် သူက “ကျွန်တော်လုပ်တာဟာ နော်ဝေနိုင်ငံကို အစ္စလာမ်အန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်ချင်လို့ပါ”ဟု ဆိုသည်။
၁၁၊ ၁၁၊ ၂ဝ၁၄
Posted by ashin kusalasami at 6:58 PM No comments:
စကန်ဒီနေဗီးယားတိုင်းပြည်များသို့ ခရီး (အပိုင်း ၁ဝ)
ယခင်အပတ်မှ အဆက် .....
အချို့တက္ကသိုလ်ဝန်းကျင်မှ ပါမောက္ခများ၊ သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် ပညာတတ်များကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို တဖြည်းဖြည်း စိတ်ဝင်စားလာကြသည်ဟု ဆိုသည်။
ဖန်ဆင်းရှင်၊ ဖန်ဆင်းခြင်း စသောအကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးမှုပင် မပြုလုပ်ချင်ကြသောလူများ တိုးပွားလာနေသည်ဟု ဆိုသည်။
အာ့ဟုစ်တက္ကသိုလ် (Aarhus University)က ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပြန်သော စာရင်းတစ်ခုအရ ဗုဒ္ဓဘာသာကို လေ့လာကျင့်သုံးသူ အနည်းဆုံး ၂ သောင်းဝန်းကျင်ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းသည်ကို တွေ့ရသည်။
ယနေ့အချိန်မှာတော့ ထို့ထက်မက များပြားနေလောက်ပြီဟု စာရေးသူ ခန့်မှန်းကြသည်။
ယနေ့အချိန်တွင် ဥရောပ၌ ခရစ်ယာန်ကျောင်းများစွာ ဖျက်သိမ်းနေရသည့်အဆင့်သို့ ရောက်နေပြီဟု ဆိုသည်။ ယခင်က Church Tax ခေါ် ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ထောက်ပံ့သောအခွန် ထားရှိပြီး ခရစ်ယာန်ဘာသာကို အစိုးရက ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ယခုအခါ Church Tax ခေါ် ခရစ်ယာန်ဘာသာထောက်ပံ့ဖို့ ကောက်ခံသောအခွန်ကို မပေးလိုတော့သော ပြည်သူများနှစ်စဉ် သိန်းချီရှိလာနေသည်ဟု ဆိုသည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် ခရစ်ယာန်ကျောင်းများ ပိတ်ပစ်နေရခြင်း ဖြစ်သည်။
မိမိတို့၏ဘဝကို တိုးတက်အောင် အားကြိုးမာန်တက် မိမိဘာသာ ကြိုးစားပြီး ရလဒ်ထွက်လာသောအခါ ဘုရားသခင်ပေးသည်ဟူသော အယူအဆအပေါ် တဖြည်းဖြည်း အယုံအကြည် ကင်းမဲ့လာသည့်သဘောဖြစ်သည်။ ကိုယ်လုပ်လျှင် ကိုယ်ရသည်၊ ကိုယ်ဖန်တီးလျှင် ဖန်တီးသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်၊
ရလဒ်များအတွက် မိမိကိုယ်တိုင်သာ တာဝန်ရှိသည်ဟူသော အယူအဆ ထင်ရှားစွာ ပေါ်ထွက်လာခြင်းဟု ဆိုနိုင်သည်။
Church Tax ခေါ် ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ထောက်ပံ့သောအခွန်စနစ်ကို ကြည့်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ သာသနာရေးဌာနကို သတိပြုမိသည်။ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မိသည်။ ယခုအခါ ဘာသာခြားများ၏ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်ခြင်း၊ ဝေဖန်ထောက်ပြခြင်းတို့ကို သံယောင်လိုက်ပြီး ဒီမိုကရေစီစနစ်နှင့်သာသနာရေးဌာန လုံးဝမလိုက်ဖက်တော့ပြီဟူသောအမြင်ကို အချို့ဗုဒ္ဓဘာသာများပင် ပြောလာသည်ကို တွေ့ရသည်မှာ စိတ်ပျက်ဖွယ် ကောင်းလှသည်။
ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလှပါသည်ဆိုသော မည်သည့်နိုင်ငံမှာမဆို အများစု၊ အနည်းစု ခွဲခြားမှုက ရှိတတ်ပါသည်။ သဘာဝတရားပင် ဖြစ်သည်။
အများစုက အများစုဖြစ်လို့ အားကောင်းနေခြင်းသည် လောကသဘာဝအရ ဖြစ်သည်။ အများစုက အသာရခြင်း၊ ကြီးစိုးခြင်းသည်လည်း လောကသဘာဝအရပင် ဖြစ်သည်။ အများစုက အနည်းစုကို အနိုင်ကျင့်ခြင်းသည်သာလျှင် လောကသဘာဝ၊ ဓမ္မသဘာဝကို ဆန့်ကျင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
ခရီးသွားရင်းဖြင့် အတွေးတစ်ခု ဝင်ခဲ့သေးသည်။ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံတွင် ဒေသခံလူမျိုးများနှင့်ဝင်ဆံ့နိုင်စွမ်းရှိသော သာသနာပြုရဟန်းတော်များသာ ရှိလျှင် နှစ်အနည်းငယ်အတွင် ဗုဒ္ဓသာသနာပြန့်ပွားလာနိုင်စရာ ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ချမ်းသာသူများနှင့် ချမ်းသာသောဆရာတော်များ ဥရောပတွင် သာသနာပြုစင်တာများ တည်ဆောက်ဖို့ အာရုံကျလာသောနေ့ ဥရောပတွင် ဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားနေ့ဟုပင် ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါ သာသနာပြုစင်တာများက ရှိစုမဲ့စု မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာအနည်းငယ်ကိုသာ အမှီသဟဲပြုမနေဘဲ ဒေသခံများနှင့် အလုပ်အတူလုပ်နိုင်စွမ်းရှိသောသာသနာပြုများသာ ဖြစ်ဖို့တော့ လိုအပ်ပါသည်။
ဒိန်းမတ်ရာသီဥတုက ဂျာမနီထက် အနည်းငယ် ပိုအေးနေသည်။ ညပိုင်းတွင် ကိုဘလိုင်တို့အိမ်၌ အလ္လာပသလ္လာပစကားများ ပြောကြသည်။ မိမိတို့နိုင်ငံအကြောင်းများ၊ ဒိန်းမတ်လူနေမှုဘဝများအကြောင်း ပြောဖြစ်ကြသည်။ ထူးထူးခြားခြား ကြားသိရတာတစ်ခု ရှိပြန်သည်။ ဘိန်းသမားလိုင်စင်နှင့် အရက်သမားလိုင်စင် ဟူသည်တည်း။ ဒိန်းမတ်တွင် အစိုးရ၏ပေါ်လစီမှာ ဒုစရိုက်အမှုများ၊ အကြမ်းဖက်မှုများ ပပျောက်ရေးဖြစ်သည်။
ဘိန်းစားချင်သလား စား၊ ရတယ်။ ဒုစရိုက်တော့ မလုပ်နဲ့။ အရက်ချည်းပဲ သောက်ချင်သလား၊ သောက်၊ ရတယ်။ ဒုစရိုက်တော့ မလုပ်နဲ့။ အများပြည်သူများ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင်တော့ မလုပ်နဲ့။
ဘိန်းစားကလည်း အစိုးရထံမှာ ဘိန်းစားဖို့ ပိုက်ဆံတောင်းခံနိုင်သည်။ အစိုးရကလည်း ဘိန်းသမားလိုင်စင်ထုတ်ပေးပြီး ဘိန်းစားဖို့ ပိုက်ဆံပေးထားသည်။
ဘာအလုပ်မှ မလုပ်ချင်တော့ဘူး၊ ကျွန်တော် အရက်ပဲ တစ်သက်လုံး သောက်တော့မယ်ဆိုသူကလည်း အရက်သမားလိုင်စင်ဖြင့် တစ်သက်လုံး အစိုးရဆီက အရက်ဖိုးယူကာ အရက်ချည်းပဲ သောက်နေနိုင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံက အရက်သမား၊ ဘိန်းသမားများ ဒိန်းမတ်သို့ လာသင့်သည်။ ဒိန်းမတ်တွင် လမ်းဘေး၌ စိတ်အေးလက်အေး မူးရူးပြီး အမြဲတမ်း အရက်သောက်နေသူအချို့ကို တွေ့ရတတ်သည်။
သာမန်လူကောင်းသူကောင်းများပင် မဆိုထားဘိ။ အရက်သမား၊ ဘိန်းစားများပင် ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်ရသော တိုင်းပြည်ပါတကား။
ဒိန်းမတ်၊ နော်ဝေ၊ ဆွီဒင် စသော စကန်ဒီနေဗီးယန်းတိုင်းပြည်များက အကျဉ်းထောင်များအကြောင်းကိုလည်း ပြောဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာ ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုဖြင့် ထောင်ဒဏ်အစီရင်ခံရသည်ဆိုပါစို့။ အကျဉ်းထောင်က ချက်ချင်းထောင်ထဲမထားသေးဘဲ လက်တွင် ထိန်းချုပ်သည့်ကိရိယာလေးတပ်ပေးပြီး ရက်ချိန်းပေးကာ အိမ်ပြန်လွှတ်သည်လည်း ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
သူတို့ထောင်များက ကမ္ဘာ့တစ်နံတစ်လျားမှ လူအများစု၏ လူနေမှုဘဝထက် အဆင့်အတန်း မြင့်ပါသည်။ စာရေးသူတို့နိုင်ငံသားများ၏ ၇ဝ ရာခိုင်နှုန်းခန့်လောက်၏ လူနေမှုဘဝများထက် သာလွန်ကောင်းမွန်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဥပမာ မြန်မာနိုင်ငံ ကျေးရွာများတွင် ကိုယ်ပိုင်အခန်း၊ ကိုယ်ပိုင်ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာ၊ စနစ်ကျသောအားကစားကွင်း၊ စနစ်ကျသောစာကြည့်တိုက်၊ စနစ်ကျသော ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု၊ တီဗွီ စသောပစ္စည်းများ လူတိုင်း အသုံးမပြုနိုင်ကြပါ။
သူတို့ ထောင်များတွင် သန့်ရှင်းသော ရေချိုးခန်းအိမ်သာရှိသည်။ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သော အိပ်ရာနှင့် အိပ်နိုင်သည်။ အားကစားကွင်း ရှိသည်။ ဘတ်စကတ်ဘောလား၊ ဘောလုံးလား၊ ဘောလီဘောလား၊ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ကစားနိုင်သည်။ စနစ်ကျပြီး အင်တာနက်ပါ အသုံးပြုနိုင်သောစာကြည့်တိုက်တွင် ဗဟုသုတရှာမှီးနိုင်သည်။ ရံဖန်ရံခါ ဘဝအတွက် အသုံးတည့်သော သင်တန်းများလည်း တက်ရောက်ခွင့် ရတတ်သည်။ မိမိ၏ကျန်းမာရေးနှင့်သင့်လျော်သော အစားအသောက်ကိုလည်း ရွေးချယ်စားသောက်နိုင်သည်။
သူတို့ထောင်များအကြောင်း သိရသောအခါ ထောင်ကျချင်စိတ်တောင် ပေါက်လာနိုင်စရာ ရှိသည်။ သို့ရာတွင် ထောင်ဆိုသည့်အတိုင်း မိမိဆန္ဒရှိတိုင်း ခရီးသွားခြင်း၊ လူမှုရေးဆောင်ရွက်ချက်များ လုပ်ဆောင်ခြင်း စသော လူသားတစ်ယောက်၏ လွတ်လပ်ခွင့်များကတော့ ဆုံးရှုံးစေပါသည်။
ကိုဘလိုင်တို့အိမ်တွင် တစ်ညတာ တည်းခိုပြီး နောက်တစ်နေ့တွင် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံမှ နော်ဝေနိုင်ငံသို့ ဆက်လက်ထွက်ခွါကြမည် ဖြစ်သည်။ နော်ဝေနိုင်ငံမှ အလုပ်အားနေသူ ကိုလှမင်းက လာကြိုသည်။ သင်္ဘောကြီးဖြင့် သွားကြမည်ဟု ဆိုသည်။ ပင်လယ်ခရီးသွားရမည်ဆိုသဖြင့် စိတ်လှုပ်ရှားလာသည်။
လွန်ခဲ့သော ၂ဝဝ၂ ခုနှစ်လောက်က ကိုကိုးကျွန်းသို့ သင်္ဘောဖြင့် သွားခဲ့သည့် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ခရီးစဉ်ကို အမှတ်ရမိသည်။ ထိုစဉ်က အထပ် ၄ ထပ်ခန့်ရှိသော သင်္ဘောဖြင့် သွားခဲ့ရသည်။ တစ်ညအိပ် ၂ ရက်ခရီးဖြစ်သည်။ ပင်လယ်လှိုင်းလုံးများ၊ ပင်လယ်ကြီးထဲတွင် ပျောက်ကွယ်လျောဆင်းသွားသောနေလုံးနီနီကြီးကို တခုတ်တရ တွေတွေငေးငွေး ကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပုံများကို သတိရသည်။
သင်္ဘောပေါ်တွင် လူငယ်များက “ရွှေပင်လယ်ကြီး …. ကာဆီးထားလို့ ….”ဟူသော သီချင်းကို အားရပါးရ ဆိုနေကြပုံများကိုလည်း သတိရသည်။ အခု သင်္ဘောဖြင့် ခရီးသွားရပြန်ဦးမည်။
ကိုဘလိုင်တို့ မိသားစုနှင့်အခြားမိသားစုဝင်များကို နှုတ်ဆက်ကြသည်။ ကပ္ပိယကြီးကားနှင့်ကိုစိုးစိုးမောင်တို့ကားဖြင့် သင်္ဘောဆိပ်ဆီ ထွက်ခွါခဲ့ကြသည်။ သင်္ဘောဆိပ်ရောက်သည်နှင့် ထီးထီးမားမားကြီး ကျောက်ချရပ်နေသော သင်္ဘောကြီးကို မြင်ရသည်။
စိတ်ထဲမှာ အတော်လေး မင်သက်မိသွားသည်။ ဒီသင်္ဘောကြီးနှင့် သွားရတော့မည်ဆိုသောအတွေးဖြင့် စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။
သင်္ဘောပေါ်ရောက်ဖို့အတွက် လေဆိပ်တွေမှာလို Check in တွေ၊ Terminal တွေနှင့် ဖြစ်သည်။ ကပ္ပိယကြီးကတော့ လူရော၊ ကားရော သင်္ဘောပေါ် တက်ရမည်ဖြစ်သဖြင့် သီးသန့်နေခဲ့သည်။ ပြီးမှ ကားနှင့်အတူ သင်္ဘောပေါ် တက်မည်။
ဝ၆၊ ၁၁၊ ၂ဝ၁၄
Posted by ashin kusalasami at 10:09 AM No comments:
စကန်ဒီနေဗီးယားတိုင်းပြည်များသို့ ခရီး (အပိုင်း ၉)
ယခင်အပတ်မှ အဆက် .........
တိုင်းသူပြည်သားများကို ကျောသားရင်သား မခွဲခြားဘဲ၊ အာဏာရှိ,အာဏာမဲ့ မခွဲခြားဘဲ၊ ဆင်းရဲသား,ချမ်းသာသူ မခွဲခြားဘဲ အပြစ်နှင့်ထိုက်တန်စွာ တရားစီရင်ခြင်းများ မရှိသေးသရွေ့ “သဗ္ဗေ သတ္တာ အဝေရာ ဟောန္တု … သုခီ အတ္တာနံ ပရိဟရန္တု”ကို တစ်ထိုင်တည်း အကြိမ်တစ်သန်းရွတ်လည်း ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး မငြိမ်းချမ်းပါ၊ မချမ်းသာပါ။
ထို့ထက်ပိုရွတ်လည်း ရွတ်သူကတော့ သမာဓိရပြီး ငြိမ်းချမ်းချင် ငြိမ်းချမ်းမည်၊ တိုင်းပြည်ကတော့ ဘာမှ ထူးလာမည် မဟုတ်ပါ၊ ငြိမ်းချမ်းသော၊ အေးချမ်းသောတိုင်းပြည် ဖြစ်လာလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
ဘုရားပေးသောနည်းလမ်းများကို လိုက်နာကျင့်သုံးမှုမရှိဘဲ "အေးချမ်းပါစေ" မည်မျှပင် မေတ္တာပို့နေသော်လည်း အေးချမ်းမှုက ရောက်ရှိလာမည်မဟုတ်ပါ။ အလုပ်မေတ္တာမပါဘဲ နှုတ်မေတ္တာသာ ပို့နေခြင်းသက်သက်သည် တစ်ခါတစ်ရံ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကို စော်ကားနေခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်ဟုပင် ဆိုချင်သည်။
“အရှင်ဘုရား … ခဏနေ ရောက်တော့မယ်ဘုရား”။ ကိုစိုးစိုးမောင် အသံကြားမှ ပတ်ဝန်းကျင်ကို သတိပြုမိသည်။ မိုးက အတော်လေး သည်းလာသည်။ ကားနောက်ခန်းက ဟောက်သံကြား၍ ကြည့်လိုက်သည့်အခါ ကိုစိုးစိုးမောင်၏ သမီးငယ်လေး ဟောက်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အသက် ၅ နှစ်ခန့်သာ ရှိသော်လည်း လူကြီးတစ်ယောက်လို ထူးထူးခြားခြား ဟောက်တတ်နေသည်။ ခဏကြာတော့ ရွှေညဝါဆရာတော် တရားဟောနေသည့်အိမ်သို့ ရောက်သည်။ ဆရာတော်က တရားဟောနေပြီ။ ဆရာတော်နှင့်တပည့်ဦးသူရိယတို့က အပြုံးဖြင့် ဆီးကြိုသည်။ တရားပွဲက ညနေ ၄ နာရီခန့်ကျမှ ပြီးသည်။
အမြဲတမ်း ရွှင်လန်းတက်ကြွနေသော ကပ္ပိယပြောင်ကြီးခေါ် ကိုမောင်မောင်သိန်းတို့ ဇနီးမောင်နှံလည်း အပြုံးမပျက်။ ဆရာတော့်တရားပွဲတွင် ရပ်ဝေးရပ်နီးမှ မြန်မာအယောက် ၄ဝ ခန့် တရားနာလာကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံး သံဃာတစ်ပါးမျှ မရှိသဖြင့် ဆရာတော်များကို ဖူးတွေ့ရသဖြင့် အားလုံး ပျော်ပျော်ပါးပါး တက်တက်ကြွကြွ ဖြစ်နေကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ တရားပွဲပြီးသောအခါ တစ်ညတာ ခိုနားမည့် ကိုဘလိုင်၏အိမ်သို့ ထွက်ခွါရန် ပြင်ဆင်ကြသည်။
မထွက်ခွါမီ နော်ဝေသို့ သွားမည့်ခရီးစဉ်ကို ဆွေးနွေးကြသည်။ အင်တာနက်မှ သင်္ဘောလက်မှတ်များ ဖြတ်ကြသည်။ ဒိန်းမတ်မိုးက သဲကြီးမဲကြီး ရွာချလိုက်၊ ဖွဲဖွဲ ဖွဲဖွဲ ရွာနေလိုက်၊ လုံးဝရပ်သွားလိုက်။ ရွှေညဝါဆရာတော်နှင့်စာရေးသူတို့အားလုံး ကားလေးဖြင့် ကိုဘလိုင်တို့အိမ်သို့ သွားခဲ့ကြသည်။
မိနစ် ၄ဝ ခန့်ကားမောင်းပြီးသောအခါ ကိုဘလိုင်တို့ အိမ်သို့ ရောက်သည်။ ဆရာတော်များအတွက် ထပ်ခိုးလေးတွင် နေရာချထားသည်။ ထပ်ခိုးဆိုသော်လည်း ဥရောပအိမ်များ၏ထုံးစံအတိုင်း နေပျော်ဖွယ်ရှိပါသည်။
ဤနိုင်ငံတွင် မည်မျှဆင်းရဲသည့်မိသားစုပင် ဖြစ်စေ မိသားစုနေဖို့ မသင့်တော်သော အလွန်သေးငယ်ကျဉ်းမြောင်းသောအိမ်များနှင့် နေခွင့်မပြုဟု ဆိုသည်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်သမားဆိုလျှင် တစ်ဦးတစ်ယောက်သမားနှင့် သင့်လျော်သည့်အိမ်မျိုးတွင်သာ နေနိုင်သည်။ မိသားစုဆိုလျှင် မိသားစုနှင့်သင့်တော်သောအိမ်မျိုးတွင်သာ နေရသည်။ ကိုဘလိုင်တို့မှာ မိသားစုဖြစ်သဖြင့် အပေါ်ထပ်၊ အောက်ထပ် ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာ၊ မီးဖို၊ ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်း စသဖြင့် အပြည့်အစုံ ရှိသည်။
စာရေးသူတို့ အထပ်နံရံများတွင် ၈ လေးလုံးအမှတ်တရ ပန်းချီများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ရွှေဝါရောင်လှုပ်ရှားမှုပုံများ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံများနှင့် NLD ပုံများ အပြည့်ကပ်ထားသည်။ ထူးထူးခြားခြား ဦးသန်းရွှေပုံကို ဟစ်တလာနှုတ်ခမ်းမွေးတပ်ပြီး အောက်တွင် စာရေးထားသော ဓာတ်ပုံကိုလည်း ရယ်ရွှင်ဖွယ် တွေ့ရသည်။ ခဏနားပြီးသောအခါ ဗဟုသုတအနေဖြင့် ရှော့ပင်းစင်တာတစ်ခုသို့ လိုက်ပြသည်။
ရာသီဥတုအေးသဖြင့် ဦးသူရိယနှင့်အတူ ဆွယ်တာဝယ်ဖို့ လိုက်ရှာသည်။ လူကြီးများဝတ်သောဆွယ်တာများမှာ စာရေးသူတို့နှင့် မည်သို့မျှ ဝတ်မဖြစ်ပါ။ သို့ဖြင့် ၁၃ နှစ်သားများအတွက်ဟူသော စာတန်းချိတ်ထားသောနေရာမှ ဆွယ်တာများကို ဝယ်ခဲ့ရသည်။ သူတို့အတွက် ၁၃ နှစ်သားဆွယ်တာသည် စာရေးသူနှင့် အံကိုက်ဖြစ်နေသည်။ ရှမ်းဒကာလေးက ဆွယ်တာဖိုး လှူသည်။ တယ်လီနောကုမ္ပဏီအရောင်းစင်တာတစ်ခုကိုလည်း စင်တာအတွင်း တွေ့ခဲ့ရသည်။
မြို့တွင်းရှိ လူများ သွားလာလှုပ်ရှားနေကြပုံမှာ အလွန်အေးဆေးလွန်းသည်ဟု ထင်သည်။ စာရေးသူတွေ့ဖူးသည့် ပြာယာခတ်ကာ ခပ်သုတ်သုတ်သွားလာနေကြသော စင်္ကာပူမှ လူများ၊ ဂျာမနီမှ လူများနှင့်လည်း မတူဟု ထင်သည်။ နိုင်ငံက ကျယ်ပြီး လူဦးရေနည်းပါးခြင်း၊ စားဝတ်နေရေးအတွက် ကြောင့်ကြကင်းခြင်း စသည်တို့ကြောင့် ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။
ဒိန်းမတ်တွင် လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅ သန်းကျော် ၆ သန်းခန့်သာ ရှိသည်။ အများစုကိုးကွယ်သည့် ခရစ်ယာန်လူသာရင်ဂိုဏ်းကို နိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ လူဦးရေ၏ ၈ဝ% ရာခိုင်နှုန်းမှာ ခရစ်ယာန်များဖြစ်ပြီး မွတ်စလင်က ဒုတိယအများဆုံး ဖြစ်သည်။ ၄% ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသည်။
မူလခရစ်ယာန်အဖြစ်မှ မွတ်စလင်များဖြစ်သွားခြင်း မဟုတ်ဘဲ စီးပွားရေးအရ၊ နိုင်ငံရေးအရ ခိုလှုံလာကြသူများ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ အခြားဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာတို့လည်း အနည်းငယ်ရှိသည်။
အခြားနိုင်ငံများ အထူးသဖြင့် တူရကီ၊ ယူဂိုဆလားဗီးယား၊ ပါကစ္စတန်၊ မော်ရိုကို၊ အီရက်၊ အီရန်၊ လစ်ဘနွန်၊ ဆိုမာလီယာ၊ သီရိလင်္ကာနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့မှ နိုင်ငံရေးခိုလှုံလာကြသူများ မြောက်မြားစွာ ရှိသည်။ ၁ သန်းဝန်းကျင်ခန့်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းကြသည်။
ခိုလှုံလာကြသူများအနက် ဗီယက်နမ်တစ်နိုင်ငံတည်းမှ ခိုလှုံလာကြသူများသာ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဖို့၊ ခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖို့ အလားအလာရှိသည်။ ကျန်သည့်နိုင်ငံများမှ ခိုလှုံလာကြသူများမှာ မွတ်စလင်များသာ ဖြစ်ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံက နိုင်ငံရေးခိုလှုံကြသူများကား အနည်းငယ်မျှ (ထောင်ဂဏန်းသာသာ)သာ ရှိပေသည်။
အဆိုပါ ထောင်ဂဏန်းတွင်လည်း ချင်း၊ ကချင် စသည့် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များကသာ အများစု ဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကတော့ အနည်းငယ်သာ ရှိသည်။ ဤနေရာမှာတော့ လူ့အခွင့်အရေးသမားဆိုသူများကို ပြောစရာရှိလာပါသည်။ လွတ်လပ်ခွင့်၊ တန်းတူညီမျှရေး သို့မဟုတ် လူ့အခွင့်အရေးကို လက်ကိုင်ပြုနေသည်၊ ရှေ့တန်းတင်ထားသည်ဟု မည်မျှပင် ကြွေးကြော်နေပါစေ စစ်အစိုးရနှင့်မခြား ဖောက်ပြားနေသူများ များစွာရှိပါသည်။
ဒုက္ခသည်ချင်းအတူတူ ချင်းမဟုတ်လို့ ခရစ်ယာန်မဟုတ်လို့ အခွင့်မရကြရှာသော ဗမာလူမျိုးများ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာများကို အခွင့်အရေး မပေးချင်ကြပေ။ တတိယနိုင်ငံရောက် မြန်မာအများစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာက ၃ဝ ဦးဆိုလျှင် ခရစ်ယာန်က ၃ဝဝ ဦးလောက်ရှိသည်။ ထို့ထက်ပင် ကွာဟများနိုင်စရာရှိပါသည်။ ပညာသင်ဆုပေးသည့်နေရာတွင်လည်း ဘာသာရေးခွဲခြားမှုက ရှိနေပါသည်။
လူ့အခွင့်အရေးနှင့်တရားမျှတရေးဆောင်ပုဒ်များ ကိုင်ဆောင်ထားသူများ၏ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးဘက်လိုက်မှုများကို တတိယကမ္ဘာရောက် မြန်မာများ၏အခြေအနေက မီးမောင်းထိုးပြနေသည်ဟု ဆိုချင်သည်။
တတိယနိုင်ငံများသည် ယခင်အချိန်များက စစ်ပွဲများကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရခြင်းကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ တင်းကျပ်သောလူမှုအဖွဲ့အစည်းမှ ရုန်းထွက်လိုခြင်းကြောင့်သော်လည်းကောင်း မွတ်စလင်တိုင်းပြည်များမှ ဒုက္ခသည်များကို ရက်ရက်ရောရော ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ လက်ခံပြီး ကျွေးမွေးပေးကမ်းထောက်ပံ့လာခဲ့သည်။
ယနေ့အချိန်အထိ ဆိုမာလီယာနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများမှ မွတ်စလင်များ တဖွဲဖွဲ ရောက်ရှိနေကြဆဲပင် ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်မှာကား အစိုးရ၏ ထိုပေါ်လစီကို မေးခွန်းထုတ်သူများ တဖြည်းဖြည်း များလာပြီဟု ဆိုသည်။
မွတ်စလင်တိုင်းပြည်များ၏အန္တရာယ်ကို တစ်ကမ္ဘာလုံး ကြောက်လန့်နေကြပါလျှက် အဘယ့်ကြောင့် မွတ်စလင်များကို ခိုလှုံခွင့်ပေးလေသနည်း။
အတော်များများကို မေးကြည့်ဖူးသည်။ ကျေနပ်လောက်သည့် အဖြေမရပါ။ အမှန်တကယ်ပင် မေတ္တာ၊ ကရုဏာတရားများ ထားရှိကြခြင်းကြောင့်လော။ မသေချာပါ။ မသေချာသော်လည်း သူတို့တိုင်းပြည်များ၏ လုပ်ရပ်များကတော့ ဗြဟ္မစိုရ်တရားများ၏ ထင်ဟပ်ချက်များနှင့် တူနေသည်ကိုကား မည်သူမျှ ငြင်းရမည် မထင်ပါ။ စာရေးသူလည်း ဤကိစ္စကို အဖြေရှာကြည့်ဖူးသည်။
မသေချာမှုများထဲက မြန်မာဒကာတစ်ဦး၏ အဖြေတစ်ခုကိုတော့ စဉ်းစားစရာဖြစ်သည်။ မွတ်စလင်တိုင်းပြည်များ၏အန္တရာယ်ကို ကြောက်ခြင်းကြောင့်သာလျှင် မွတ်စလင်များကို လက်ခံနေခြင်းဖြစ်သည်ဟူသော အမြင်ဖြစ်ပါသည်။
တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန် ကမ္ဘာကြီးတွင် မွတ်စလင်များနှင့်အခြားလူသားများ စစ်ပွဲကြီးများ အကြီးအကျယ် ဖြစ်လာနိုင်စရာ ရှိသည်။ ထိုအချိန်မျိုးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းပေလော။ သူ့အတွေးမျှသာ ဖြစ်သည်။ မသေချာပါ။
ဘာသာတရားကို အလေးအနက်မထားလိုတော့သော ဥရောပသားတို့၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်းကြောင့်ဟုလည်း ဆိုလျှင် ဆိုနိုင်စရာအကြောင်းများ ရှိနေသည်။ ဒုက္ခသည်အဖြစ်ရောက်လာသည်နှင့် ဥရောပယဉ်ကျေးမှုကို နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ပုံစံသွင်းသည့်အနေအထားများ ရှိနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
အခြားအကြောင်းတစ်ခုကတော့ အောက်ခြေလုပ်ငန်းများ လုပ်မည့် အလုပ်သမားလူတန်းစား လိုအပ်ချက်ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သူတို့နိုင်ငံသားများ အများစုမှာ ပညာတတ်၊ လူချမ်းသာများ ဖြစ်ကြသည့်အတွက် အောက်ခြေအလုပ်များကို မလုပ်ချင်ကြသည့်အတွက် ထိုအလုပ်များ လုပ်ကိုင်နိုင်မည့် အခြားနိုင်ငံသားများကို ခေါ်သွင်းကြဟန်ရှိသည်။
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ လူဦးရေ ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်းက ခရစ်ယာန်များ ဖြစ်သည်ဟု စာရင်းဇယားအရ ဆိုသော်လည်း ယနေ့အချိန်တွင် မိရိုးဖလာမျှသာ ကျန်ရှိတော့သည်ကို တွေ့ရသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူအတွက်ဆိုလျှင် ဝမ်းနည်းဖွယ်ပင် ကောင်းလှသည်။
၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်တွင် ပညာရှင်များ စုပေါင်းပြီး စစ်တမ်းတစ်ခု ကောက်ယူခဲ့ဖူးသည်။ အဆိုပါ စစ်တမ်းအရ … ၂၈ ရာခိုင်နှုန်းသော ဒိန်းမတ်ပြည်သူများကသာ ထာဝရဘုရားကို ယုံကြည်သည်။ ၄၇ ရာခိုင်နှုန်းက ဘဝကိုတွန်းအားပေးနေသော တစ်စုံတစ်ရာ သို့မဟုတ် စွမ်းအားတစ်ခုရှိသည်ကို ယုံကြည်သည်။ ၂၇ ရာခိုင်နှုန်းက ထာဝရဘုရားလည်း မယုံကြည်၊ စွမ်းအားတစ်ခုခုရှိသည်ဆိုတာကိုလည်း မယုံကြည်ဟု ဆိုသည်။ ဘာသာမဲ့များကလည်း တဖြည်းဖြည်း တိုးပွားလာသည်ဟု ဆိုသည်။
၂၇၊ ၁ဝ၊ ၂ဝ၁၄
Posted by ashin kusalasami at 7:46 AM No comments:
စကန်ဒီနေဗီးယားတိုင်းပြည်များသို့ ခရီး (အပိုင်း ၁၁)...
စကန်ဒီနေဗီးယားတိုင်းပြည်များသို့ ခရီး (အပိုင်း ၁ဝ)...